Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Isniin Ah 13 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo isniin Ah 13 June
June 13, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha maantay oo aad Maalin kasta kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com
Juventus ayaa kalsooni ku qabta inay si xor ah ugala soo wareegi karto Paul Pogba kooxda Manchester United , iyadoo 29 jirkaan khadka dhexe ee France uu aqbalay qandaraas afar sano ah. Fabrizio Romano, Twitter
Ciyaaryahanka Tottenham Steven Bergwijn ayaa sheegay inuu xiiseynayo kooxo dhowr ah iyadoo garabka Netherlands, 24, uu doonayo inuu baxo, iyadoo Ajax ay wadahadalo kula jirto xagaaga. 90min
Daafaca midig ee Ingariiska Jonjoe Kenny, oo 25 jir ah, ayaa ballan qaaday inuu si xor ah ugu biirayo Hertha Berlin oo uu kaga soo biiray Everton . Bild – af Jarmal
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Denmark Christian Eriksen, oo 30 jir ah, ayaa go’aansaday inuu raadiyo tartan cusub, waxaana uu isku diyaarinayaa inuu ka tago Brentford , iyadoo ay xiiseynayaan kooxdii hore ee Tottenham Hotspur iyo Manchester United . Express
Manchester United ayaa sidoo kale qarka u saaran inay lasoo saxiixato xiddiga garabka uga ciyaara Brazil Antony, oo 22 jir ah, kana tirsan Ajax, iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Frenkie de Jong, oo 25 jir ah, kana tirsan Barcelona . Talksport
Chelsea ayaa ku dhow inay la soo wareegto goolhayaha Mareykanka Gabriel Slonina, oo 18 jir ah, kana tirsan Chicago Fire ka dib markii Real Madrid laga soo diiday dalab 10m euros ah (£8.5m). Fabrizio Romano, Twitter
Leeds United ayaa safka hore kaga jirta saxiixa 23 jirka reer Argentine ee kooxda New York City Valentin Castellanos. Sport i sii
Khadka dhexe Matteo Guendouzi ayaa rajaynaya in daafaca France William Saliba, oo 21 jir ah, uu raaco isaga oo Marseille kaga soo biiray Arsenal xagaagan, ka dib markii ay labadooduba amaah ku joogeen kooxda Faransiiska xilli ciyaareedkii hore. 90min
Haddii daafaca France Jules Kounde, oo 23 jir ah, uu ka tago Sevilla kuna biiro Chelsea markaas Barcelona ayaa xiiseyneysa saxiixa Kalidou Koulibaly, laakiin Napoli ayaa ugu yaraan 40m euros (£ 34.1m) ku dooneysa 30 jirka reer Senegal. Mundo
Newcastle ayaa ku rajo weyn inay Juventus iyo AC Milan kula tartanto saxiixa xiddiga khadka dhexe ee reer Talyaani Nicolo Zaniolo, oo 22 jir ah, kana soo jeeda RomaGazetta dello Sport – af Talyaani
Inter Milan ayaa qarka u saaran inay si xor ah ula soo wareegto Paulo Dybala oo ay kaga soo biiray Juventus , iyadoo weeraryahanka reer Argentina oo 28 jir ah uu ku yimid heshiis seddex sanno ah. Goal
Paris St-Germain ayaa laga diiday dalab 40 milyan euros ah oo u dhiganta (£34.1m) si ay u hesho daafaca Slovakia Milan Skriniar, laakiin Inter Milan ayaa laga yaabaa inay 60m euros (£51.2m) ku qaadato 27 jirkaan.Gazzetta dello Sport – Talyaani
River Plate ee Argentina ayaa la xiriirtay weeraryahanka reer Uruguay Luis Suarez si uu ugu biiro beeca xorta ah marka uu 35 jirkaan ka tago Atletico Madrid xagaagan. Tuttosport – Talyaani
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City ee 21 jirada England James McAtee, 19, ayaa qarka u saaran inuu kala hadlo Huddersfield Town heshiis amaah hal xilli ah. SUN